Waa maxay isticmaalka cirbadaha nanoloyinka ee nankoleed? | AASraw
/blog/nandrolone decanoate/Waa maxay isticmaalka duritaanka Nandrolone decanoate?
Posted on 10 / 31 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray nandrolone decanoate.
Deca Durabolin, oo inta badan loo yaqaan "Deca", waa magac caan ah Nandrolone decanoate (C28H44O3), steroid anabolic taasoo hagaajinaysa waxqabadka iyadoo kor u qaadaysa xoog iyo istaandarka, yareeya daalka muruqa, iyo si weyn u kordheysa koritaanka murqaha. Waxay bixisaa guulo aad u ballaaran wakhtiga waqti dheer oo leh saameyn yar oo yar marka la isticmaalo si masuuliyad leh. Waad ku mahadsan tahay kala duwanaanta qiyaasta waxtarka leh, ragga intooda badani waxay u dulqaadanayaan. Wax dheeraad ah ka ogow Deca Durabolin iibka hoose si aad u ogaato haddii ay tahay midda saxda ah ee adiga kugu habboon.
Deca Durabolin Astaanta budada cayriin - Waa maxay budada ceeriin ee Deca Durabolin?
Budada cayriin ee 'Deca Durabolin' ee iibka ah waa steroid aad u dhiska dhiska ah oo aad u yar sifooyinka androgenic, taas oo macnaheedu yahay inay bixiso guulo aad u fiican oo leh waxyeelo aad u yar oo aan loo baahnayn markii si masuuliyad leh loo isticmaalo. Qeybtaan xilli-xilli-ciyaareedka ka mid ah miisaanka kuma darto sida ugu dhakhsaha badan kuwa kale, oo waxay leedahay nolol barkeed aad u dheer tan iyo markii ay sii waddo inay jidhka ku sii deyso muddo illaa saddex toddobaad ah. Qaar ka mid ah steroids ayaa miisaanka si dhakhso leh u kordhiya, laakiin in badan oo ka mid ah culeyskaas waa biyo. Natiijooyinka budada ceeriin ee Deca Durabolin way ka duwan yihiin. Guushu way soo gaabinaysaa, laakiin waa kuwo tayo sare leh. Si loo dheellitiro dabeecadda qunyar-socodka ah ee Deca, kuwa badan oo jidh-dhiseyaal ah waxay bilaabeen wareegyadooda iyagoo si dhaqso leh u shaqeynaya sida Dianabol.
Budada cayriin ee 'Deca Durabolin' ee iibka ah waxay ku timaaddaa qaabab la isku duro, kiniinno, iyo cabitaanno. Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah kaniiniyada iyo kaabsoosha waxay qaadanayaan waqti dheer in la shaqeeyo waana ka yar yihiin kuwa la heli karo jirka waxay doorbidaan irbadaha. Iyadoo la isticmaalayo qaabka laysku duro, wax awood ah looma dhumo inta lagu jiro dheef-shiid kiimikaadka waxaadna ku gaari kartaa natiijooyin wanaagsan oo milligaraam milligaraam. Maxaa badan, sababta oo ah tani waa xarun jajab-jilicsan marka loo eego qaar ka mid ah kuwa kale, ma arki doontid "rush" si ay steroids kale u keeni karto.
Macluumaadka Cyca Durabolin Warbixinta
Inkastoo dad badani aaminsan yihiin in kiniiniyada Deca Durabolin ama cirbadaha ay yihiin kaliya daan-qabsi, tanu waa mid run ah. Ciyaartoyda badan waxay ogaadaan in duritaanka durbada Deca Durabolin inta lagu jiro goynta wareegga ayaa sidoo kale waxtar leh. Inta lagu jiro marxaladda googo-goyska, cayaaraha cayaaraha iyo jimicsiga si loo yareeyo baruurta jirka Nasiib darro, cuntadan iyo jimicsigan badanaa waxay keenaysaa daal iyo walaac aan jirin. Sida kor ku xusan, dhammaystirka qiyaas yar oo ah Deca Durabolin inta lagu jiro marxaladda goynta waxay ku dari kartaa tamar iyo istaandarka, taas oo gacan ka geysaneysa joojinta xayawaanka sida Winstrol si fiican u shaqee.
Dhererka amniga ee amniga ayaa gaari doona toddobaadyada XNUM ee alaabtan, inkastoo aad u badan tahay inaad qaadato, mudada gaaban ee wareeggaagu waa inuu ahaado. Tusaale ahaan, haddii aad qaadato 18mg todobaadkii, wareegga toddobaad ee 300 waa ammaan. Taa beddelkeeda, haddii aad doorbidayso qadar sare, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xadiddo wareeggaaga toddobaadyada 18 oo keliya. Tani waxay kaa caawineysaa inaad iska joojiso qaar ka mid ah saameynta aan la rabin ee Deca Durabolin, sida dhibaatooyinka wadnaha ama muddada dheer kalyaha.
Halkee u iibso Genuine Nandrolone Decanoate Decanantariyada qoyan ee shabakada internetka?
Waxaad ka heli kartaa Nandrolone Decanoate badan oo ah budada dusha qoyan ee shabakada internetka, laakiin way adagtahay inaad ka iibsato budada "Genuine Nandrolone Decanoate" online. Waxaa jira ilo badan oo iibiya alaabta been abuurka ah ee suuqa. marka aad iibsato budada Nandrolone Decanoate online, waxaad u baahan tahay inaad doorato a ilo sugan.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habboon,soo dhawow inaad gujiso halkan.
Sidee loo sameeyaa tijaabada tijaabada ah ee loo yaqaan 'Cypionate testosterone' oo laga soo qaado budada isteeroydhiska PCT Letrozole budada cayriin-Shan shay waa inaan ogaadaa !!!